Ma helin jawaabta aad rabto?Fariin noogu soo dir bogga nala soo xiriir.
Aaway shirkaddaadii?Ma ii sheegi kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shirkaddaada?
Shirkaddayada iyo warshadeena waxay ku yaalaan No.18 Qiaogao Road, Xiqiao Town, Nanhai Degmada, Foshan, Guangdong, Shiinaha.
Shirkadda alaabta guriga ee Goodtone waxay u heellan tahay wax soo saarka iyo dhoofinta alaabta xafiisyada 9 sano, macaamiisheena intooda badani waxay joogaan Yurub iyo Maraykanka.
Waa maxay sababta aan qiimaha loogu muujin mareegahaaga?
Qiimahayadu waa isbedeli karaan iyadoo ku xiran sahayda iyo arrimaha kale ee suuqa.Mareegta Gootone (www.goodtonechair.com) waa mareeg soo saaraha oo loogu talagalay in lagu muujiyo wax-soo-saarkayaga. Haddii aad rabto inaad hesho macluumaadka qiimaha, ha ka walaacin inaad la xiriirto iimaylkayaga.
Ma bixisaa adeegga ODM?
Haa!Haddii aad u baahan tahay inaanu ku samayno kuraas qaabka aad bixisay, fadlan nala soo xidhiidh si aan u wada hadalno.Waxa kale oo laga yaabaa inaan bixino fikrado lagu hagaajinayo naqshadaynta kursiga.
Waa maxay muddada dammaanadda ee kuraasta?
Waxaan bixinaa dammaanad 5-sano ah.Dammaanad ahaan iyo haddii kaleba, waa dhaqanka shirkadeena in ay wax ka qabato oo ay xalliso dhammaan arrimaha macaamiisha si qof kastaa ku qanco.
Waxaad lacagta ku bixin kartaa akoonkeena bangiga:
Hubaal, waxaan bixin karnaa dukumeentiyada intooda badan oo ay ku jiraan Shahaadooyinka Falanqaynta/U hoggaansanaanta;Caymis;Asalka, iyo dukumentiyada kale ee dhoofinta marka loo baahdo.
Waa maxay tirada ugu yar ee dalabkaaga?
Looma baahna MOQ, laakiin sida caadiga ah waa 20 konteenar, waxaad dalban kartaa nooc kasta cadad kasta oo midab kasta ah dalabka weelka.
Haddii aad si gaar ah u xiisaynayso mid ka mid ah alaabtayada, fadlan nala soo xidhiidh wakhtiga, waxaanu ku tusi doonaa muunadayada iyo qaabaynta alaabtayada.
Sideen ku heli karaa muunada?
Fadlan ku soo dir codsigaaga muunada foomka waydiinta.
Qiimaha dhoofintu wuxuu ku xidhan yahay habka aad u dooratay inaad alaabta ku hesho.
Express sida caadiga ah waa kan ugu dhaqsiyaha badan laakiin sidoo kale ugu qaalisan.Baabuurta xamuulka qaada ayaa ah xalka ugu fiican ee xaddi badan.Qiimaha xamuulka sida saxda ah waxaan ku siin karnaa kaliya haddii aan ogaano faahfaahinta cadadka, miisaanka iyo habka.Fadlan nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah
Intee in le'eg ayay igu qaadanaysaa in aan helo kursiga xafiiska kadib marka aan dalbado?
Shaybaarada, wakhtiga rasaastu waa ilaa 7 maalmood.Wax soo saarka tirada badan, wakhtiga hogaanka waa 20-30 maalmood ka dib markii la helo lacag-bixinta deebaajiga.
Waqtiyada hogaanka ayaa wax ku ool noqda marka (1) aanu helnay deebaajigaagii, iyo (2) waxaanu haysanaa ogolaanshahaada ugu dambeeya ee alaabtaada.Haddii wakhtiyada hogaanka aanu ku shaqaynayn wakhtigaaga kama dambaysta ah, fadlan ku gudub shuruudahaaga iibkaaga.Dhammaan kiisaska waxaan isku dayi doonaa inaan daboolno baahiyahaaga.Inta badan kiisaska waan awoodnaa inaan sidaas sameyno.
MA RABAA IN AAD NALA SAMEYSO XIRIIR GANACSIGA?